Taliska Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed Oo Soo Saaray Digniin – Goobjoog News
Taliyaha ciidanka Asluubta Soomaaliyeed Sarreeye Gaas Xuseen Xasan Cismaan oo saxaafadda kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa ka digey in la dhisto dhulka ay leeyihiin ciidanka Asluubta kuna yaalla nawaaxiga Isbitaalka Keysaney duleedka degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho.
Wuxuu sheegay taliyaha in ay jiraan shaqsiyaad doonaya in dadka ay ku siraan dhulkaasi oo loogu talogalay in lagu xanaaneeyo maxaabiista, waa sida uu hadalka u dhigaye.
Taliye Xuseen ayaa sheegay in cid walbo oo qarash iska gelisa dhulkaasi ay iyadu mas’uul ka noqon doonto khasaaraha soo gaara, dhulkaasina uu yahay mid dan guud ah.
Sidoo kale taliyaha ayaa sheegay in horey ay digniin ugu direen shaqsiyaadka ku howlan arrimahan, balse ay weli ka dhego fureysanayaan.
Nawaaxiga Isbitaalka Keysaney waxaa ku yaalla dhul aad u weyn kuna dhow halka dhagxaanta laga qodo lagana soo saaro carada ee loo yaqaan Kaawooyinka, waxaana ay dowladda dhexe ugu talo gashay in maxaabiista halkaasi lagu hayo, ayna sidoo kale ka shaqeeyaan.
Booliiska Gobolka Baay Oo Shaaciyey Qorshe Al-shabaab Ka Damacsan Yihiin K/galbeed
Mweysw yhunuj Canadian viagra 50mg cost of cialis
Mzriyd raeqjj buy discount viagra online cialis over the counter 2020
Gkipne dlfalj cheap generic viagra online cialis
Zwsyjw rtbfir Canadian pharmacy viagra canadian pharmacy online
exceptional college essays need help with chemistry homework...
writing a cover letter for employment write essays apa forma...
writing scientific essays speech homework trig homework solv...
powerpoint presentations write an essay about your life expe...
writing a short speech buy coursework online uk essay writin...